Home / Habits of A highly Effective Student
“The greatest object in educating is to givearight habit of study” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။
🔹ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလိုလို ဖြတ်သန်းလာကြရတဲ့ Student Life ဆိုတာနဲ့ ခွဲခြားထားလို့မရတာကတော့ Studying ဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍပါပဲ။ ကျောင်းသားဘဝကို ပျော်သလောက် စာကျက်ရတာကို မနှစ်သက်ကြတာကလည်း ကျောင်းသားတိုင်းလိုလိုရဲ့ အတူညီဆုံး အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
🔹စာမေးပွဲနီးမှ ဘယ်ဘာသာကို ဘယ်က ဘယ်လို စကျက်ရမှန်းမသိတာမျိုးတွေ၊ ကျက်ဖို့အချိန်မလောက်တော့တာမျိုးတွေ၊ စိတ်အပူလွန်ပြီး စာကျက်ဖို့ အာရုံစိုက်လို့မရတော့တာမျိုးတွေ၊ အကုန်စုပုံကျက်ပြီး တစ်ခုမှ ရေရေရာရာ မမှတ်မိတော့တာမျိုးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ ကြုံဖူးကြမှာပါ။
🔹ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံနေရတာက ကိုယ့်ရဲ့ Student Life မှာ နည်းစနစ်ကျတဲ့ Studying Habit (စာကျက်နည်း) ရှိမနေလို့ပါပဲ။
ဆိုတော့ စာကျက်တယ် ဆိုတာကြီးကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး အလုပ်တစ်ခုလို့ မမြင်တော့အောင် ကိုယ့်ရဲ့ ကျောင်းသားဘဝမှာ ဘယ်လို နည်းလမ်း အလေ့အထ ကောင်းတွေ သုံးပြီး စာလေ့လာရမလဲ?
🔹တစ်နည်းထပ်ပြောရရင် “Student Life” မှာ Ordinary Student အဖြစ်ကနေ “Effective Student” အဖြစ်ပြောင်းလဲလာအောင် ဘယ်လို Studying Habits တွေနဲ့ လေ့လာရမလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
🔸 ပထမဆုံး စာကျက်ဖို့ Plan အရင်ချမှတ်ပါ။
ကိုယ့် Daily Routine မှာ စာကျက်ချိန်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိရဲ့လား? ရှိခဲ့ရင်ရော ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးရှိရှိ သေချာ စာလုပ်ဖြစ်လဲ? အမှတ်ထွက်လာချိန်မှာရော ကိုယ့် result တွေကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရှိရဲ့လား? စတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ရဲ့ Performance ကို ၁၀၀% ကျေနပ်မှု မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ငါဘယ်လိုအချိန်မှာတော့ ဘယ်စာကို ကျက်မယ်၊ လေ့လာမယ်ဆိုတာကို ပုံမှန် Schedule တစ်ခုအနေနဲ့ ထားကို ထားသင့်နေပါပြီ။ ဒီလို နေ့စဉ် ပုံမှန် စာလေ့လာခြင်းက အောင်မြင်တဲ့ ပညာရေး လမ်းကြောင်းအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး အကျင့်တစ်ခုလို့ ဆိုလို့လည်းရပါတယ်။
🔸 ကျက်မယ့် စာရှိပါစေ။
ဒီလိုကြားရင် ရယ်စရာ လို့ထင်ရပေမယ့် ဒါက အရေးကြီးတဲ့ Task တွေထဲက တစ်ခုပါ။ ကိုယ်လေ့လာမယ့် စာအတွက် ဘယ်လို Note တွေ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ၊ ဘာတွေကို အဓိက ထားပြီး လေ့လာ မှတ်သားမှာလဲ စတာမျိုးတွေကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Schedule တွေချ Timetable တွေဆွဲပြီးမှ ဘယ်စာကို ဘယ်ကစပြီး ကျက်လို့ ကျက်ရမှန်း မသိတဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုတာ ကျောင်းသားတိုင်း ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ ဆိုတော့ Subject 1 ကို လေ့လာမယ်ဆို သီအိုရီပိုင်းကို လေ့လာမှာလား၊ တွက်တဲ့ အပိုင်းက Formula တွေကို မှတ်မှာလား၊ Highlight လုပ်ထားတဲ့ အပိုင်းတွေကိုပဲ Revise ပြန်လုပ်မှာလားဆိုတာ သေချာ စီစဉ်ထားတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
🔸 စာကျက်ချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိပါစေ။
ဆိုတော့ စာကျက်ဖို့ Plan တွေသေချာ ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အရေးကြီးဆုံး တစ်ခုက နေ့စဉ် စာကျက်ချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားရှိဖို့ပါပဲ။ ဒီလို သတ်မှတ်ထားတာက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အလိုလို ဒီအချိန်ရောက်ရင်တော့ စာကျက်ရတော့မယ့် ဆိုတဲ့အသိကို အကျင့်ဖြစ်လာစေနိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း Productive ပိုဖြစ်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဥပမာ ကိုယ့်အတွက် စာကျက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က ည ၇နာရီကနေ ၉ နာရီထိ ဆိုပါစို့။ ဒီအချိန်ကိုပဲ နေ့စဉ် စာကျက်ချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး စာလေ့လာတာက အကောင်းဆုံးသော စာကျက်တဲ့အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။
🔸 Target ရှိပါစေ။
ဆိုလိုချင်တာက ဒီနေ့ နှစ်နာရီအတွင်း Chapter ဘယ်နှစ်ခု အပြတ်ကျက်မယ်ဆိုတာမျိုး ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ ဒီလို ဆုံးဖြတ်ချက်ကြိုချထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ရဲ့ Capacity ကို ကိုယ်တိုင် သိရှိလာနိုင်မယ်။ ဒီလို နေ့စဉ် ဘယ်လောက်ထိ ကျက်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ Target မျိုးကနေ ဒီ Semester အတွင်း ဒီ Academic year အတွင်း ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အထိ ကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိးတွေကို ကိုယ်တိုင် Goal ချမှတ်ပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားရှိတတ်လာမှာပါ။
🔸 စာကျက်တဲ့နေရာက ရှင်းလင်းနေပါစေ။
ဒါကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ စာကျက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာရယ်မဟုတ် နံရံကြီးကို ငေးကြည့်နေရတာတောင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလာတတ်ကြတာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အကျင့်ပါ။ ဆိုတော့ ကိုယ်စာကျက်မယ့် နေရာ ပတ်လည်မှာ စာအုပ်တွေကလွဲရင် ဘာမှ မရှိတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဓိက ကတော့ ဖုန်းတွေပေါ့။ စာလေး ၅မိနစ်လောက်ကျက်လိုက် ဖုန်းလေးဖွင့် Facebook ကို တစ်နာရီလောက်သုံးလိုက် ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကနေ ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ဖုန်းကို အဝေးဆုံးမှာထားပါ။ ဖုန်းလာတာ မက်ဆေ့ ဝင်လာတာတွေကို အာရုံရောက်ရောက်နေလို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖုန်းပိတ်ပြီး ကျက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
🔸 အနှောက်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ စာကျက်တတ်ပါစေ။
အများစုအတွက်က ကိုယ်စာလုပ်မယ့်နေရာက TV က အသံတွေ၊ သီချင်းသံ၊ လူသံ၊ ကားသံတွေနဲ့ ဆူညံနေမယ်ဆိုရင် စာကျက်ရတာ ဘယ်လိုမှ အာရုံစိုက်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိ့ကျတော့လည်း အရမ်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ အခါ အာရုံစိုက်လို့မရတော့တဲ့အကျင့်မျိူးရှိလို့ သီချင်းလေးဖွင့်ပြီး ကျက်တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ အနှောင့်အယှက်များတဲ့ နေရာမျိုးမှာ စာကျက်မယ်ဆိုရင်တော့ ခရီးတွင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အနှောင့်အယှက်ထက် ကိုယ်တိုင် အတွေးနယ်ချဲ့ရင်း စာကို အာရုံ မစိုက်နိုင်တာမျိုးလည်း အများဆုံးဖြစ်တတ်တာမို့ ကိုယ်တိုင်လည်း အာရုံစိုက်ပြီး ဘယ်လို အနှောက်အယှက်မှ မရှိနိုင်မယ့် အခြေအနေမျိုးမှာ လေ့လာတတ်ပါစေ။
🔸 Short Break ယူပါ။
အချိန်အကြာကြီး ဆက်တိုက် စာကျက်တာမျိုးထက် နာရီဝက်၊ တစ်နာရီ စာကျက်ပြီးတဲ့နောက် ၁၀မိနစ်လောက် အနားယူတာမျိုးက ဦးနှောက်ကို အနားပေးရာလည်း ရောက်သလို စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ပိုမိုမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စာကျက်ရာမှာလည်း ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အပြင် အချိန်တော်တော်ကြာထိ စာကျက်နိုင်လာတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
🔸 တချိန်ထဲမှာ စာတွေကို စုပြုံကျက်တာမျိုး ရှောင်ပါ။
ချက်ချင်း စုပြုံကျက်လိုက်လို့ ခဏတဖြုတ် ရရင်ရသွားနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ကိုယ်ကျက်ထားတာတွေကို သေချာ လုံး၀ မှတ်မိနေတတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်ပေးကျက်ရမှာခြင်း အတူတူ ကိုယ်တိုင်လည်း သေချာ သိရှိ နားလည်ပြီး မှတ်သားနိုင်မယ်၊ လက်တွေ့မှာလည်း ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မယ်၊ ဒီလို Effective ဖြစ်တဲ့ နည်းလမ်း မျိုးတွေကိုသာ အသုံးချပြီးကောင်းမွန်တဲ့ စာကျက်နည်းအလေ့အကျင့်တွေနဲ့ ကျက်မှတ်လေ့လာပါ။
ကိုယ်က ကျောင်းသားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Cramming လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို စွန့်လွှတ်သင့်ပါပြီ။
🔹ဆိုတော့ “Build strong study skills to study smarter, not harder” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။
🔹ဒီလို အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေသာ ရှိပြီဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းမှာ ‘Highly Effective Student” တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပါပြီ။
🔹ကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို ကျင့်ယူပြီး စနစ်တကျ လေ့လာမှတ်သားယူရင်း ဘဝရဲ့ အောင်မြင်မှု ခရီးလမ်းမှ အခက်အခဲများအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။